John Templeton Quotes: Iwo 9 Akanyanya, Biography uye Templeton Foundation | Ehupfumi Zvemari
Claudi Casals | 25/09/2021 10:21 | General hupfumi
Kana chinhu chimwe chiri pachena, ndeyekuti maitiro emusika nemanzwiro evanhu zvakabatana zvakanyanya. Naizvozvo, hazvishamise kuti vazhinji vevatengesi vakura vanodzidzawo munhu uye mibvunzo mikuru yehupenyu, senge philanthropist John Templeton. Uyu muAmerican aifarira kwazvo sainzi uye nezvese, kunyange kugadzira hwaro hwake kupa mari zvidzidzo zvine chekuita nemibvunzo mikuru yehupenyu. Neichi chikonzero uye nehungwaru hwake hukuru, zvirevo zvaJohn Templeton zvinokurudzirwa zvakanyanya.
Kunze kwekunyora mitsara mipfumbamwe yakanakisa yemuAmerican investor uye philanthropist, isu tichataurawo zvishoma nezve kuti murume uyu aive ani uye hwaro hwaakagadzira.
1 Aya 9 akanakisa mitsara yaJohn Templeton
2 John Templeton aive ani?
Aya 9 akanakisa mitsara yaJohn Templeton
Asati ataura nezvemurume mukuru uyu, ngatinyororei nine o'clock mazwi akanakisa aJohn Templeton. Saka iwe unogona kuwana zano rekuti uyu investor mukuru aive akaita sei uye kuti aifunga sei.
Ndakafunga kuti ndaizongova papasi rino kamwe chete, uye kwenguva pfupi chete. Chii chandingaite nehupenyu hwangu izvo zvinozounza mabhenefiti zvachose? "
"Avo vanoshandisa zvakawandisa ichava midziyo yeavo vanobiridzira."
"Ndine chokwadi chekuti vazukuru vedu, mukati memakore zana kana maviri, vachationa zvakare nekusuwa kumwechete kwatakaita kuvanhu vakazvipira kusainzi mazana maviri emakore apfuura."
«Mazwi mana anodhura kwazvo muChirungu ndiwo Ino nguva yakasiyana. "
"Ngatinamatei vamwari, asi ngatinzwisisei kuti huMwari hwatinonamata hwunopfuura kunzwisisa kwedu."
"Shanda kuve munhu anozvininipisa."
"Hunhu hwetsika nehunamato hwenheyo hwaro hwebudiriro uye mufaro munzvimbo dzese dzehupenyu."
"Misika yemombe inoberekwa nekusava netariro, inokura mukusahadzika, kukura mukuva netariro, uye kufa mukufara."
"Iye zvino ndiri kutarisisa hupfumi hwezvemweya, uye ndiri mubishi, ndinoshingairira uye ndinofara kupfuura zvandakamboita."
John Templeton aive ani?
Muna 1912 protagonist wedu, John Templeton, akaberekerwa mutaundi diki muUnited States rinonzi Winchester. Aive mwanakomana wemhuri yePresbyterian uye mukomana wekutanga mudhorobha kuenda kukoreji. Izvo zvinofanirwa kucherechedzwa kuti haana kungoenda kuyunivhesiti ine mbiri, Yale, asi aive zvakare mumwe wevokutanga vekirasi yake. Kutanga muna 1937, akatanga basa rake paWall Street, achiwana ruzivo rwakawanda uye kuunganidza huchenjeri hunoratidzwa mumitsara yaJohn Templeton.
Yake nzira yekudyara yaive yakakosha. Tenga zvakaderera uye tengesa zvakakwirira. Muna 1954, investor uyu akagadzira "Templeton Funds", homwe yakatevera zano rekusiyana uye kudyidzana kwenyika. Izvi zvakaita kuti Templeton ave piyona mune mutual fund manejimendi.
John Templeton akapedzisira asiya nyika yake yekuAmerica kutora Britain. Gare gare akagara muBahamas, nzvimbo inozivikanwa yemutero. Sarudzo mbiri idzi dzakazobudirira kwazvo padanho remutero. Maererano nemagazini mariJohn Templeton ndiye "akanakisa kunhonga zvitoro muzana rese rezana." Nekudaro, hunhu hwake hwekupa hupenyu hwaive huchiwedzera kuwedzera mukurumbira. Akazopedzisira atengesa "Templeton Funds" pamadhora mazana mana nemakumi mana nemakumi mana, achisvika pakureba kukambani yakadaro.
Kubudirira kwake kukuru senge philanthropist kwakashamisa Mambokadzi Elizabeth II, achimutumidza kuti Knight weBritish Empire. Aya ndiwo maitirwo akaitwa Sir John Templeton. Nekudaro, akaenderera mberi achirarama hupenyu hwekuzvininipisa uye hune mwero. Akafa aine makore makumi mashanu nemapfumbamwe muNassau, muBahamas.
Sezvingatarisirwa, kwete chete kuti zvirevo zvaJohn Templeton zvakasiya huchenjeri hwavo hwakanyorwa, kana zvisiri zvakare akateedzana emabhuku aakaburitsa muhupenyu hwake hwese. Tichazonyora pazasi, zvichiteerana uye nemusoro wazvo wekutanga muChirungu:
1981: Maitiro ekuzvininipisa: Masayendisiti anowana Mwari
1992: Templeton Chirongwa: 21 Matanho Ekubudirira Kwemunhu uye Mufaro Chaiye
1994: Mwari Ndiye Chete Chaiye Here? Sayenzi Inonongedza kune Zvakadzama Zvinoreva Nyika
1994: Kuziva Mitemo yeHupenyu
1997: Ndarama Nuggets kubva kuna Sir John Templeton
2005: Akatendeka Mari 101: Kubva muhurombo hwekutya Uye Makaro KuPfuma Yekudyara Kwemweya
2006: Pfuma yePfungwa neMweya: John Marks Templeton's Treasure yeMashoko Ekubatsira, Kufuridzira, uye Kurarama Na
Kana zviri zvekushandurwa muchiSpanish, kune imwe chete kubva muna2004, yakanzi Nyaya yeshamhu: ngano yehungwaru uye kuzviziva.
Kunze kwemashoko makuru aJohn Templeton, Uyu philanthropist akasiyawo hwaro hwakatumidzwa shure kwake. Parizvino, mutungamiri wenheyo iyi mwanakomana wake: John M. Templeton Jr. Kunyangwe ichinzi "John Templeton Foundation," inozivikanwa se "Templeton Foundation."
Chaizvoizvo chinangwa chake ndechekushandira semhando yehunhu hunobatsira uye zvakadaro kusimudzira zvitsva zvitsva zvinoenderana nemibvunzo mikuru yehupenyu:
Mari ichagadzirisa matambudziko ekusimudzira mu Africa here?
Izvo zvakasikwa zvine chinhu here?
Musika wepachena unokanganisa hunhu here?
Sayenzi inoita kuti kutenda muna Mwari kushaye basa here?
Mhindumupindu Inotsanangura Hunhu Hwevanhu Here?
Sezvauri kuona, iyi mibvunzo inovhara misoro dzakasiyana, kubva pamitemo yepasi nepasi, kune simba iro musika, musika wemasheya kana mari ine vanhu. Iyi nheyo yakazvarwa kunze kwekuzvipira kwaSir John Templeton kutsvagurudzo yesainzi. Chirevo chayo ndechekuti "Zvishoma sei zvatinoziva, isu tine shungu dzekudzidza", zvinoreva kuti aitarisira kupa nenzira iyi kufambira mberi kwevanhu vese kuburikidza nezvakawanikwa zvechokwadi.
Iyo John Templeton Foundation inovhara nzvimbo dzinoverengeka maererano nemari, izvo zvatiri kuzonyora izvozvi:
Sayenzi uye mibvunzo mikuru: Sayenzi yepanyama uye yemasvomhu, sainzi yehupenyu, saenzi yemunhu, huzivi uye dzidziso, sainzi muhurukuro.
Rusununguko uye rwemahara danho
Kunoshamisa matarenda ekuziva uye nehunyanzvi
Zviripachena kuti mitsara yaJohn Templeton haingogadzise chete nezve hupfumi, asiwo pamunhu.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ehupfumi Zvemari » General hupfumi » John Templeton Quotes